Iingcebiso ezi-5 malunga nokuBhala kweMxholo wokuThengisa oqhuba ixabiso leShishini | Martech Zone
NgoLwesine, Meyi 11, 2017 UGraham Rand
Ukwenza ikopi yokuthengisa enyanzelekileyo kuyehla ekunikezeleni ngexabiso kubalandeli bakho. Oku akwenzeki ngobusuku obunye. Ngapha koko, ukubhala umxholo wentengiso oya kuba nentsingiselo kunye nefuthe kubaphulaphuli abahlukeneyo ngumsebenzi omkhulu. Ezi ngcebiso zintlanu zibonelela ngesiqalo sesicwangciso seNewbies ngelixa zibonelela ngobulumko obunzulu kubantu abanamava.
Ingcebiso # 1: Qala ngokuphela kwengqondo
Umgaqo wokuqala wentengiso eyimpumelelo kukuba nombono. Lo mbono kufuneka ugqithe ekuthengiseni iimveliso kunye neenkonzo, endaweni yoko kugxilwe kwinto impembelelo uphawu olujonge ukuba nayo emhlabeni.
Oku akufuneki ukuba zizinto ezinkulu ezitshintsha umhlaba. Umzekelo, ukuba inkampani ithengisa imidlalo yevidiyo yemfundo yabantwana abancinci, banokuba nombono wokubonelela ngezona midlalo zemfundo zimnandi naphi na kwimarike. Oku kunokuguqula ekubhaleni umxholo wokuthengisa ojolise kuloo njongo, umzekelo ngokubhala umxholo ohlekisayo ofundisa nomfundi into enomdla.
Ukuba le nkampani, ejolise ekufundiseni nasekonwabiseni abaphulaphuli bayo (okanye abantwana babaphulaphuli bayo), ibhala iprozi ekruqulayo enesidima, ngokuqinisekileyo bayoyisakala. Ngokuqala ngesiphelo engqondweni kunye nokuba nombono, endaweni yoko balungiselelwe iphulo eliyimpumelelo.
Ingcebiso # 2: Sebenzisa iZwi loMntu omnye kuyo yonke ikopi yokuThengisa
Ikopi yokuthengisa lelinye lamathuba ambalwa apho ishishini kufuneka lithethe ngqo kubathengi balo. Kananjalo, kubalulekile ukuthintela ukuthengisa yikomiti. Ukuba abantu abalishumi abohlukeneyo kufuneka bavume ikopi yentengiso ngaphambi kokuba iye esidlangalaleni, ngekhe kubekho themba lokwenza umxholo olungileyo.
Kuthatha isibindi ukuvumela umntu omnye okanye ababini ukuba bachaze ubuntu bephulo lokuthengisa liphela. Kukho izizathu iinkampani ezenzayo, kwaye kungenxa yokuba iyasebenza. Ewe kulungile ukuba ugcine iso kwikopi yentengiso ekuqaleni. Le ayisiyongcamango eguqukayo ngaphandle kokongamela, sisikhumbuzo nje sokuthanda indlela "yokuyeka izandla" nanini na kunokwenzeka.
Ingcebiso # 3: Gxila kuguquko
Ukuthandwa kunye neembono zilungile, kodwa ishishini alinakuphila ngokuthandwa nje. Linganisa impumelelo yezinto zokuthengisa ngokusekwe kwindlela abaguqula ngayo amathemba amatsha babe ngabathengi abahlawulayo.
Qala ngokuzimisela ukuzama nokuvavanya. Njengengcebiso # 2 uthe, vumela ubuntu bomntu buchaze ithoni yokuqala yemibhalo. Njengokuba ixesha lihamba kwaye kukho idatha eyaneleyo yokuyihlalutya, lixesha lokuba ufumane amanani kunye nokuphonononga amanyathelo athile anokuthathwa lishishini ukuphucula uguquko. Ekugqibeleni, ukuba iphulo lifumana abantu aboneleyo ukuba batshintshele kubathengi abahlawulayo, kuyasebenza. Ukuphela kwebali.
Ingcebiso # 4: Buza imibuzo
Abantu kwezi ntsuku balindele ukubandakanywa kwincoko. Xa intengiso yentengiso kubo ibaxelela ukuba mabenze ntoni, banokuphendula ngokucaphuka. Endaweni yokuthatha ilizwi lesiphathamandla, zama ukuthetha nabo banokuba ngabathengi ngokulinganayo. Babuze ngezimvo zabo. Endaweni yokuthi, "Isoda yethu yeyona ilungileyo kwaye ungakholelwa ngcono kuyo!", Yiya ngendlela ethambileyo njengokuthi "Ucinga ntoni ngesoda yethu entsha emangazayo?"
Ukubuza imibuzo kuvakala kunzima ekuqaleni. I-fanbase yebrand yakho ayinakusetyenziselwa oku, kwaye kuya kuthatha imizamo embalwa ngaphambi kokuba iqale ukuphendula. Khumbula ukuba akukho mntu uphawula imibuzo engaphendulwanga, babona kuphela iincoko ezivela kwimizamo ephumeleleyo.
Ingcebiso # 5: Nje ukuba Baphendule, Qhubeka Uthethe!
Akonelanga ukubuza umbuzo uhambe. Nokuba ayinguye lo mntu ubhala ikopi yentengiso, umntu kufuneka abelwe ukuba abeke iliso kumaqonga eendaba ezentlalo kwaye aphendule kuye wonke umntu ophawulayo.
Lihlabathi elinengxolo, kwaye wonke umntu ufuna ukwamkelwa. Into elula njengokuthi "enkosi" kwiakhawunti yebhrendi inokuba ngumahluko phakathi kwe fan fan okanye ulungelelanise indlela kunye nokuthenga imveliso yakho.
Ukubhala umxholo wentengiso yinkqubo yexesha elide eya kwahluka kuhlobo ngalunye. Mamela abathengi bakho. Fikelela kubo ngomxholo ofanelekileyo, kwaye umntu omnye makachaze umfanekiso wentengiso yakho. Khumbula ukuba nokuba kwenzeka ntoni, iintengiso ezingaphumelelanga zihlala ziphela zingabonwa, ke ungoyiki ukuzama ezinye izimvo ezinesibindi. Ekugqibeleni, uphawu kufuneka lusebenzise ikopi yalo yokuthengisa ukunxibelelana nabathengi abanokubakho kwaye lubenze babe ngamalungu osapho.
tags: guqukacopywritingiingcebiso zokubhalaIingcebiso zomxholo wentengisoIkopi yokuthengisaiingcebiso zekopi yokuthengisaimibaumbhaloiingcebiso zokubhala
UGraham Rand akaneli nje kukuthanda iteknoloji, kodwa unombhali onomdla. Uhlala esweni utshintsho kwiwebhu kwaye uzama ukuhlala usesikhathini nayo yonke into entsha. Umzekelo olungileyo ngowakhe izikhokelo zokungena iwebhusayithi apho abonisa khona iitutorials zabasebenzi abatsha kwiinkampani ezahlukeneyo.